Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii xubnaha Faraca Midnimo ee xerada Dhadhaab oo guul ku dhamaaday
Shirkii xubnaha Faraca Midnimo ee xerada Dhadhaab oo guul ku dhamaaday
Maanta oo ay taariikhdu kubeegnayd 1/2/14 waxaa xerada qoxootiga Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab lagu qabtay shir si wayn loosoo agaasimay oy kasoo qaybgalay inta badan xubnaha faraca MIDNIMO.
Shirka ayaa furmay abaare 2:00 duhurnimo xiliga Dhagaxlay waxaana sidii caadada ahayd lagu furay aayadaha qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo uu soo jeediyay sh Aadan macalim oo wacdigiisa maanta diirada ku saaray dhacdooyikii ugu danbeeyay iyo adkaysiga laga doonayo dadka mujaahidiinta ah ee halganka xaqa ah ee ay JWXO caynaanka uhayso unasab sheegta.
Intaa kadib waxaa laguda galay ajandayaashii shirka oo maanta aad ubadnaa sidoo kale wajiyada kasoo qaybgalayaasha ayaa maanta muujinayay shucuur aad u badan oo aan horaan loogu arki jirin iyadoo shirka uu hadheeyay dhacdadii foosha xumayd ee fulaynimada ah ee Itoobiya afduubka ugu gaysatay mas’uuliyiin katirsan JWXO oo wadahadaladii Itoobiya iyo ONLF u joogay Nairobi.
Waxaana goobta laga soo jeediyay warbixin dheer oo dib loogu milicsanayay marxaladihii kala duwanaa ee uu halganku soomaray iyo sidii looga soo gudbay iyo iskudayadii badnaa ee uu cadawgu doonayay in uu ku hagardaameeyo halganka iyo sidii ay ugu fashilmeen.
Waxaa khudbado ka soo jeediyay mas’uuliyiin faraca katirsan oo xubnaha loogu sheegayay in dabeecada kadhaxaysa gumaystaha iyo lagumaystaha ay kamid tahay waxyaaba ay arkayaan lana doonayo in lasii labo jibaaro halgankeenii xaqa aha. Sidoo kale waxaa tixgaaban oo gabay ah madasha kasoo jeediyay Abwaan cabdulahi joobe oo tixdiisa qaybta hore ku cabiray dhacdadii ugu danbaysa ee Nairobi qaybta danbana wuxuu abwaanku kaga hadlayaa shirkii loogu magacdaray qoomiyada ee uu gumaysigu kuqabta jigjiga.
Ugu danbayntii gudiga anshax marinta ee faraca MIDNIMO ayaa abaal marino gudoonsiiyay 8 xubnood oo loo gartay in ay yihiin xubno mutaystay.
Dhanka kale gudigii iyo xubnihii madasha fadhiyay ayaa canbayrayn dusha ay ugu tuureen xukuumada Itoobiya oo ay ku tilmaameen in ay tabarteedu kusoo uruursatay afduub iyo falal anshaxa dawliga ah kasoo horjeeda.
Shirka ayaa kusoo dhamaaday guul iyadoo ay xubnuhu muujinayeen iskulana dardaarmayeen adkaysi iyo in si xowli ah loo laba jibaaro halganka ay JWXO hurmuudka utahay.